သရဝဏ်(ပြည်)(15 December 15) ﻿
ကျွန်တော်တို.မြန်မာနိုင်ငံသည် အင်မတန်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းသော အစိုးရအဆက်ဆက်၏အုပ်ချုပ်ခြင်းကိုခံခဲ.ကြရလေသည်ဆိုခြင်းကိုကျွန်တော်တို.ကိုယ်တိုင်ပင်သိချင်မှသိကြ ပေလိမ်.မည် ။အဘယ်ကဲ.သို.ပါနည်း ။ မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သော အစိုးရမင်းအဆက်ဆက်ကားအင်မတန်စိတ်ဓါတ်ကြံ.ခိုင်၍ ဝမ်းမနည်းတတ်သော အစိုးရ ကိုရထားသောကြောင်.ပင်ဖြစ်သည် ။နိုင်ငံတကာမှအစိုးရများသည် ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံမှအစိုးရလောက်စိတ်ဓါတ်မခိုင်မာ ။ ထစ်ကနည်းရှိဝမ်းနည်းတတ်သည် ။ ချီလီနိုင်ငံမှသမ္မတကြီးသည် သူ.နိုင်ငံမှကျောက်မီးသွေးမိုင်းတွင်းပြိုကျသဖြင်. လူအမြောက်အများသေဆုံးကာ လူအချို. မိုင်းတွင်းထဲတွင်ပိတ်မိနေသောအခါ ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံးကိုသတ်မှတ်ကာ ပူဆွေးဝမ်းနည်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ.သည် ။ချီလီသမ္မတသည်ကျွန်ုပ်တို.နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များလောက်စိတ်ဓာတ်မခိုင်မာကြောင်း ရှင်းလင်းစွာသိလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည် ။
မကြာသေးမီကပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ.၏တိုက်ခိုက်မှုဖြင်. ပြင်သစ်နိုင်ငံသားအများစုပါဝင်သော အပြစ်မဲ.ပြည်သူတစ်ရာကျော်သေဆုံးခဲ.ပေသည် ။ ထိုအခါ ပြင်သစ်သမ္မတသည်ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်လျက် တစ်ဖက်က အကြမ်းဖက်သမားများကိုမီးခိုးမဆုံးမိုးမဆုံးလိုက်လံတိုက်ခိုက်မည်ဟုကြိမ်းဝါးသလိုတစ်ဖက်မှလည်း ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သုံးရက်တိတိကြေငြာကာ နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများကိုပင်သွားမတက်တော.ပဲ ဝမ်းနည်းခဲ.သည် ။ ပြင်သစ်သမ္မတကားဝမ်းနည်းတတ်ရန်ကောဟုကျွန်ုပ်အပြစ်တင်မိမလိုဖြစ်သွားလေသည် ။ ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံမှာဆိုလျှင် လူတစ်ရာလောက်သေသည်ကို မဆိုထားနှင်. လူပေါင်းသိန်းနှင်.ချီ၍သေဆုံးခဲ.သော ၂၀ဝ၈ မေလ ၂ ရက်နေ.တွင်တိုက်ခတ်ခဲ.သည်. နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးတိုက်ခတ်စဉ်ကပင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဟုဆိုသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် ဝမ်းနည်းကြောင်းနိုင်ငံသို.ထုတ်ဖော်မကြေငြာခဲ.ရုံမက ၂၀ဝ၈ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပင် နိုင်ငံတော်အတွက်ရှေ.ရှုကာမုန်တိုင်းကြားမှ အတည်ပြုပေးခဲ.သည်မှာ အံ.မခန်းဖြစ်သည် ။ တော်ရုံတန်ရုံနှင်.ဝမ်းမနည်းတတ်သောနိုင်ငံ.ခေါင်းဆောင်များကိုရထားခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာပြည်မြန်မာပင်ဖြစ်လေသည် ။ သို.သော် အချိန်အနည်းငယ်သာကွာခြား၍ တရုတ်ပြည်သူ.သမ္မတနိုင်ငံတွင် ငလျှင်ဘေးကြီးဆိုက်သောအခါ တရုတ်သမ္မကြီးသည် ဝမ်းနည်းကြောင်းကြေငြာလျက် ပြညသူလူထုရှေ.သို.ထွက်လာသည်မှာ ယောက်ကျားရင်.မာကြီးဖြစ်ပါလျက် ကျွန်ုပ်တို.နိုင်ငံအကြီးအကဲလောက်စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာမှုမရှိချေ ။ ရှမ်းပြည်နယ်တာလေတွင်ငလျင်လှုပ်သည် ။ ကျွန်ုပ်တို.နိုင်ငံအကြီးအကဲကား ဝမ်းနည်းသည်မရှိ တကယ်ပင်ချီးမွမ်းဖွယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ပါပေ၏ ။
နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များသည် ကျွန်ုပ်တို.ခေါင်းဆောင်များကဲ.သို. စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာသူများမဟုတ်ပဲ မဲဆန္ဒဖြင်.တက်လာသောအရပ်သားများဖြစ်ရကား စိတ်ဓါတ်ပျော.ညံ.လှချေ၏ ။ ဂျပန်တွင်ငလျှင်ကြီးလှုပ်၍လူတို.သေဆုံးကြရာ ဂျပန်ဝန်ကြီး ချုပ်သည် အလကားနေရင်းဝမ်းနည်းကြောင်းကြေငြာလေသည် ။ဂျပန်တွင်ပင်မြေအောက်ဘူတာရုံတွင်ဓါးကိုင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သဖြင်. လူအများသေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ.ခြင်းအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်သည်တိုင်းပြည်ကိုတောင်းပန်ကာဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ကြေငြာခဲ.သည် ။ တောင်ကိုရီးယားတွင် ကုတို.သင်္ဘောနစ်မြုပ်မှုကြောင်. ကျောင်းသားကျောင်းသူများအပါအဝင် လူအမြောက်အများသေဆုံးကြရာ ပို.ဆောင်ရေးဝန်ကြီးသည်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်သွားပြီး သမ္မတက ဝမ်းနည်းကြောင်းကြေငြာလေသည် ။ တကယ်တော.သင်္ဘောမှောက်ခြင်းသည်ဘာမှဝမ်းနည်းရန်မလိုကြောင်းကို မြန်မာ.ခေါင်းဆောင်များသင်ပြပေးသဖြင်. ကျွန်တော်တို.နားလည်ခဲ.ပြီးဖြစ်ပါသည် ။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကမ်းရိုးတမ်းသွားသင်္ဘောတစ်စင်းနစ်မြုပ်ခဲ.ရာ ရာသီဥတုမကောင်းသဖြင်.လည်းကောင်း ၊သင်္ဘောမှာကြံ.ခိုင်မှုအားနည်းသဖြင်.လည်းကောင်း လူသား၏အမှားဟူ၍စိုးစေ.မျှမရှိကြောင်း တာဝန်ရှိသူများကပြောကြားသဖြင်. အားတက်ခဲ.ရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ သင်္ဘောမှောက်တိုင်းဝမ်းနည်းတတ်သောလူမျိုးထဲတွင်မြန်မာမပါဟု ကမ္ဘာသိအောင်ကြေငြာခွင်.ရသဖြင်.ဂုဏ်ယူမိပါသည် ။
တဖန် မလေးရှားတွင် မလေးရှားလေကြောင်းမှ MH370 ဟူသော လေယာဉ်ကြီးအစအနမှရှာမတွေ.အောင် ပျောက်ဆုံးသွားသောအခါ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်သည် ဝမ်းနည်းကြောင်းကြေငြာခဲ.လေ၏ ။ အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာသော ဝန်ကြီးချုပ်ပါတကား ။ကျွန်ုပ်တို.နိုင်ငံတွင် Air Bagan လေယာဉ်ကြီးပျက်ကြပြီး ဧည်.လမ်းညွှန်မနွယ်လင်းရှိန်နှင်. ဒေသခံဦးပြားတို.သေဆုံးသွားသောအခါ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများသည် သိပ်ဝမ်းနည်းဟန်မပြပါ ။ တောင်လိုလိုမြောက်လိုလိုဖြင်.ပြီးသွားပါသည် ။မလေးရှားတို.အကဲပိုနေခြင်းသာဖြစ်ဟန်ရှိသည် ။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ၍ လူတွေသေသောအခါ ထိုင်းဘုရင်ကြီးနှင်. အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်များက ဝမ်းနည်းကြောင်းပြောကြားကြသည် ။ ထိုင်းတို.သည် မျက်ရည်လွယ်သူများဖြစ်ဟန်ရှိသည် ။ကျွန်တော်တို.အစိုးရသည် ဤမျှပျော.ညံ.သူများမဟုတ် ။ လက်ပန်းတောင်းတောင်တွင် ဆန္ဒပြသံဃာတော်များကို ဝမ်ပေါင်ကုမ္မဏီဝန်ထမ်းများနှင်. ရဲတပ်ဖွဲ.မှမီးလောင်စေသောလက်နက်များဖြင်.ပစ်ခတ်သဖြင်. သံဃာများဆိုးဆိုးရွားရွားမီးလောင်ဒဏ်ရာရသောအခါတွင်မှ နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ဝမ်းနည်းကြောင်းမပြောကြားပါ ။အင်မတန်စိတ်ခိုင်ပါသည် ။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသည် ကျွန်ုပ်တို.ခေါင်းဆောင်များ၏ သမာဓိအားကိုအတုယူသင်.ပါသည် ။ သူတို.ဆီတွင် တိုင်းသူပြည်သားများဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည်နှင်.ဝမ်းနည်းကြောင်းကြေငြာပါသည် ။ မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင်.ရာထူးမှနှုတ်ထွက်သူကနှုတ်ထွက်ပါသည် ။ ကျွန်တော်တို.ကတော.ဤမျှလွယ်လွယ်နှင်.နှုတ်ထွက်မည်မဟုတ်ပါ ။တိုင်းသူပြည်သားများက မလိုလားပါဘူးဟုပြောခဲ.သည်.တိုင် ချက်ခြင်းမယုံသေးပဲ ကိုယ်.ဘာသာထွက်ချင်မှထွက်မည်ဖြစ်သည် ။ ရန်ကုန်မြို.တွင် စိမ်းလဲ.ကန်သာ ဧည်.ဂေဟာအနီး ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ်သောအခါ ကျွန်တော်တို.ခေါင်းဆောင်များသည် တပ်မတော်လူထွက်များပြီပြီ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာလှပြီး မည်သူကမျှဝမ်းနည်းကြောင်းမပြောကြားခဲ.ပါ ။အမှုတွင်လူသတ်တရားခံမဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်း စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာလှသောထိုစဉ်ကရဲချုပ်ခင်ရီကိုပင်လျှင် ဦးခင်ရီအဖြစ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး်ရာထူးတိုးမြှင်.မြှောက်စားခဲ.ပါသည် ။ ကိုပါကြီးသေဆုံးစဉ်ကလည်းထိုနည်းနှင်နှင်ဖြစ်သည် ။ တောင်သူဒေါ ်ခင်ဝင်းသေဆုံးစဉ်ကလည်းထို.အတူပင်ဖြစ်သည် ။ဝမ်းနည်းခြင်းဟူသည် လွယ်လွယ်ကြေငြာရသောအလုပ်မဟုတ်ပါ ။ နိုင်ငံခြားကခေါင်းဆောင်တွေသည် အယူလွဲနေကြခြင်းဖြစ်သည် ။
၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီလထဲတွင် မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်တစ်စုသည် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကန်.ကွက်ဆန္ဒပြကြပါသည် ။ထိုကျောင်းသားများကိုအရေးမယူပါဟု သမ္မတရုံးဝန်ကြီးအပါအဝင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကတိပေးပြီးကာမှ လပ်ပံတန်းတွင်အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖြိုခွင်းတော. မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကျောင်းသားမိဘတိုင်းစိတ်မကောင်းကြပါ ။ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာကာဝမ်းနည်းကြပါသည် ။ သို.သော် ကျွန်တော်တို.သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ကားဝမ်းနည်းပုံမရပါ ။ ဟိုကရိုက်လို.သည်ကပြန်ရိုက်ရပါတယ်ဟုပင် နိုင်ငံခြားအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ဖာလိုက်ပါသေးသည် (ဖာလိုက်သည်ဆိုရာတွင်စကားဖာသည်ကိုဆိုလိုပါသည် ) ။သေသေချာချာစဉ်းစားကြည်.တော.သမ္မတကြီးမှန်ပါသည် ။ သူသည် နှလုံးသားတွင် စက်တပ်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရာ ပုံမှန်လူတွေလိုအလကားနေရင်းဝမ်းနည်းတတ်သောခံစားချက်မရှိပါ ။ ဝမ်းနည်းသင်.မှနည်းမည်ဖြစ်သည် ။ ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြ၍အဖမ်းခံရတိုင်းဝမ်းနည်းနေလျှင်မျက်ရည်ကအလကားရသည်မဟုတ်ပါ ။ နှလုံးအတုတပ်ထားသဖြင်.မျက်ရည်လည်းလွယ်လွယ်ကျတတ်သူမဟုတ်ပါ ။
နိုင်ငံခြားခေါင်းဆောင်တွေကတော. အလကားနေရင်းဝမ်းနည်းကြောင်းခနခနကြေငြာတာတွေ.ရလေသည် ။ ဗုံးပေါက်တာလူသေလို.ဝမ်းနည်းသတဲ. ၊ မြေပြို၍ဝမ်းနည်းသတဲ. ၊ မီးလောင်သဖြင်.ဝမ်းနည်းသတဲ. ၊ ငလျင်လှုပ်၍ဝမ်းနည်းသတဲ. ၊သေနတ်သမားဝင်ရောက်ပစ်ခတ်၍ဝမ်နည်းသတဲ. ၊ ရဲတပ်ဖွဲ.ဝင်တစ်ဦးပစ်ခတ်သဖြင်.လူမည်းတစ်ဦးသေ၍ဝမ်းနည်းသတဲ. ။ အပိုတွေဝမ်းနည်းနေကြတာဟုမြန်မာကထင်သည် ။ မကြာခင်ကပဲ ဖားကန်.တွင်မြေစာပုံများပြိုကျမှုကြောင်. လူတစ်ရာကျော်နေ.ခြင်းညခြင်းအရှင်လတ်လတ်သဂြိုဟ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည် ။ ဖားကန်.သည် တပ်မတော်ဦးပိုင်ကိုလည်းကောင်း ၊ခရိုနီများကိုလည်းကောင်း ၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအချို.ကိုလည်းကောင်း ၊ ဒေါ ်လာသန်းနှင်.ချီ၍ရှာပေးနေသောဒေသဖြစ်သည် ။ထိုဒေသဝယ်ဆင်းရဲသားပြည်သူတို.သေခြင်းသည် ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုသမ္မတကြီးကထင်၍ ဝမ်းနည်းကြောင်းကြေငြာသည် ။ဝမ်းနည်းကြောင်းကြေငြာသည်. သမ္မတကြီးဟူသည်မှာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှသမ္မတကြီးဖြစ်သည် ။မြန်မာသည်ထိုကိစ္စကိုဝမ်းနည်းစရာမလိုအောင်ကို တရားရရှိပြီးသားဖြစ်သည် ။လူဆိုတာသေမျိုးတွေချည်းဖြစ်သည် ။လူသေတိုင်းဝမ်းနည်းမနေနိုင် ။
လောက်ကိုင်စစ်ပွဲတွင်တရုတ်ဘက်သို.မှားယွင်းဗုံးကျဲမိသဖြင်.တရုတ်နိုင်ငံသားများသေတော. မြန်မာဘက်ကဝမ်းနည်းကြောင်းကြေငြာသည် ။ ဟိုတလောကတော. ဦးအောင်သောင်းတစ်ယောက်ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ရောဂါဖြင်. စင်္ကာပူတွင်ဆေးသွားကုရာမှသေဆုံးသွားသည် ။ လွှတ်တော်ကဦးအောင်သောင်းအတွက်ဝမ်းနည်းကြောင်းအဆိုတင်သည် ။ အစဉ်အမြဲ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာ၍ ဝမ်းမနည်းတတ်သော မြန်မာ.ခေါင်းဆောင်များရှားရှားပါးပါးဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်သည် ။ ပြည်သူတွေကတော.အစိုးရနည်းပေးလမ်းပြလုပ်ကာသင်ကြားပေးထားသဖြင်.သိပ်ပြီးဝမ်းနည်းပုံမရ ။ ကျွန်တော်.တစ်သက်ဝယ်အစိုးရလူကြီးမင်းများဝမ်းနည်းတတ်တာ တစ်သက်နဲ.တစ်ကိုယ်ထိုတစ်ကြိမ်ပဲတွေခဲ.ဖူးလေသည် ။ နှလုံးအတုတပ်ထားသောကျွန်တော်တို.သမ္မတကြီးလည်းတစ်ခါတစ်ရံဝမ်းနည်းတတ်ပါသည် ။